Zavakanto Lego-aingam-panahy avy amin'ny mpanakanto Japoney | Famoronana an-tserasera
Lego dia tafiditra tsara ao amin'ny kolontsaintsika ankapobeny ary ankoatry ny maha-ampahany amin'ny fahazazan'ny olona an-tapitrisany sy ireo taranaka vaovao ho avy dia izy ihany koa manompo amin'ny endrika maneho hevitra raha misy manana talenta hampiasana azy ho endrika fanehoana.
Un Mampiasa sanganasa Lego ny mpamorona Japoney hanehoana izay azo foronina miaraka amin'ireo zavaboary entanin'ny karazana sakafo isan-karazany toy ny akondro na hamburger somary hafahafa. Tsy ho gaga isika amin'izany hevitra manaitra izany, satria avy amin'ireto andalana ireto dia mazàna isika mitondra karazana artista samy manana ny fahaizany manokana.
Tary no mpamorona an'ireny vinavina ara-javakanto miaraka amin'i Lego ary mirona amin'ny famolavolana ny sasany amin'ny tarehintsoratra Star Wars ihany koa izy, saingy ao anatin'ity iray mahavelom-bolo kokoa ity izay toa tsy dia milamina kokoa izy manome antsika andian-dahatsoratra.
Manerana an'izao tontolo izao misy Mpamorona Master 40 Lego ary ny tsirairay amin'izy ireo dia voafantina tsara amin'ny orinasa. Mitovy amin'ny asa asa tanana hafa izy ireo, manomboka amin'ny maha-mpianatra azy ireo hanadino ny fampianaran'ny mpampianatra amin'ireo izay mianatra teknika samihafa, zavatra izay matetika maharitra taona vitsivitsy alohan'ny handraisany izany laharana izany ho an'ny tenany.
Iray amin'ireo tompon'andraikitra mamorona, Paul Chrzan, dia manamafy fa matetika no lazainy amin'ny rehetra izany aza atsahatra ny fananganana sy ny famoronana. Tsy maintsy mamorona sy milalao ny sombin-javatra foana ianao ary tsy tafiditra ao anatin'ny fahazarana isan'andro izay matetika mamorona trano sy sambon-danitra. Io ihany no mamporisika ny fiezahana hamorona biby fiompy ao amin'ny fianakaviana, sarin'ny ray aman-dreny na zavatra hafa noho ny mazàna amboarina miaraka amin'ity karazan-kazo Lego ity.
Ianao dia manana ny flickr an'ny mpamorona Japoney hanohy ny asany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Kanto Lego nataon'ny mpanakanto Japoney